တုံ့ပြန်မှု နှင့် နာကြည်းခြင်း
Reaction and Resentmentယ Practical Christian Living Course4Lesson 17
သော့ချက်ကျမ်းပုဒ် ။ ။ တရားတော်ကို နှစ်သက်သောသူတို့၌ ကြီးစွာသောငြိမ်ဝပ်ခြင်းရှိပါ၏။ သူတို့စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ ဆာ ၁၁၉း၁၆၅
အခြားသူတဦး၏ ပြောဆိုမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအား ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းအား ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုဟုခေါ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းကြောင်းကို ပြောပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေနပ်နှစ်သက်မည်ဖြစ်သည်။ ကျေနပ်နှစ်သက်ခြင်းသည် တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မမှန်သောအရာတို့ကို အခြားသူတဦးဦးက ပြောပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်ခြင်း သည်လည်း တုံ့ပြန်မှုတခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သိပ်ပြီးဂရုမစိုက်ခဲ့ကြပါ။ အမှန်မှာ ထိုအရာတို့သည် အလွန် အမင်းအရေးကြီးသောအရာများဖြစ်ကြသည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် တုံ့ပြန်မှုများက မည်မျှအရေးကြီးကြောင်း ကို လေ့လာကြမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများအား ထိန်းကျောင်းပေးမည့် အသိဥာဏ်မျိုးကိုလည်း ရရှိ ကြမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများက အရေးကြီးရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ ဤအရာများက ရေရှည်နှင့် ထာဝရကာလအကျိုးဆက်များကိုတောင်မှ ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖြစ်ပျက်သော အရာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုလောက် အရေးမကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အား ဒုက္ခ ဖြစ်စေ သောအရာတို့သည် အချိန်တန်လျှင် ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများတွင်မူ ထာဝရကာလ အကျိုးဆက်များ ရှိနိုင်သည်။
ခရစ်ယာန်တဦးက သူသည် သူ့အဖေ၏ မမျှမတဆက်ဆံမှုကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌ မည်သို့ ခံစားခဲ့ရပုံကို ပြောပြသည်။ သူက ကျွန်တော်အရိုက်မခံသင့်ဘဲနဲ့ ကြာပွတ်နဲ့ အရိုက်ခံခဲ့ရတယ်။ ဤ အကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အဖေ့ကို နှစ် ၃၀ ကြာ နာကြည်းခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး၌၊ တစ်ညမှာ ဘုရား သခင်ဟာ ကျွန်တော်ကို ဤသို့ပြောခဲ့တယ်။ ““မင်းရဲ့နာကြည်းခြင်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်တော့။ မဟုတ်ရင်တော့ မင်းနဲ့ငါ ကိစ္စပြတ် သွားပြီ””။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော့်ရဲ့ နာကြည်းခြင်းကို စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။
ဤအဖြစ်အပျက်က ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာသည် ထိုအရာအပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုလောက် အရေးမကြီးကြောင်း သမ္မာတရားက ဖော်ပြထားသည်။ ကြာပွတ်နှင့်အရိုက်ခံခဲ့ရခြင်းသည် အမှန်တကယ်ပင် မမျှတစွာ မထိုက်တန်ဘဲ အရိုက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ အရိုက်ခံရသောကြောင့် ဖြစ် ပေါ်လာသောခန္ဓာပိုင်းနာကျင်မှုသည် အချိန်အတော်ကြာနိုင်သည်။ ဤလူ၏နောက်ဆုံးသော တုံ့ပြန်မှုမှာ အဘယ်နည်း? နှစ် ၃၀ ကြာ ၊ သူသည် သူ့ဖခင်နှင့် အဆက်အသွယ်ပျက်ခဲ့သည်။ နှစ် ၃၀ ကြာ ဘုရား သခင်သည် ဤလူကို အပြည့်အ၀ အသုံးမပြုနိုင်ခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့်နည်း? အကြောင်းမှာ သူ့စိတ်နှလုံးသည် နာကြည်းမှုတို့ဖြင့် ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ၏တုံ့ပြန်မှုသည် ရေရှည်နှင့်၊ ထာဝရကာလ အကျိုးဆက်များတောင်မှ ရှိခဲ့သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲရှိ ယောသပ်၏ အဖြစ်အပျက်သည် တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ များစွာ သင်ကြားပေးနိုင်သည်။ ယောသပ်သည် ယာကုပ် ၏သား ၁၂ယောက်တွင် ဒုတိယအငယ်ဆုံးသားဖြစ်သည်။ သူဖခင်က သူ့ကိုအထူးတလည်ချစ်ခဲ့သောကြောင့် သူ့အစ်ကိုများသည် မနာလို ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
တစ်နေ့တွင် ယောသပ်သည် ဘုရားသခင်က သူ့အားပေးခဲ့သော အိပ်မက်အကြောင်းကို သူ့အစ်ကို များကို ပြောပြခဲ့သည်။ ““တစ်နေ့ကျလျှင် ကျွန်တော်ဟာ အစ်ကိုတို့ကို အုပ်စိုးရမည်ဖြစ်ပြီး အစ်ကိုတို့က ကျွန်တော်ကိုပြပ်ဝပ်လျက်အရိုအသေပေးရမည့်အကြောင်းကို ဘုရားသခင်က အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကို ပြသခဲ့တယ်။ ဤအခြင်းအရာသည် သူ့အစ်ကိုများအား သာ၍အမျက်ထွက်စေခဲ့သည်။ အခွင့်အရေးရသော အခါ၊ အစ်ကိုများသည် ယောသပ်အား ကျွန်အဖြစ် အီဂျစ်ပြည်သို့ ရောင်းစားခဲ့သည်။ ထိုပြည်၌၊ သူဘက် က အမှားမလုပ်ဘဲ၊ သူ့သခင်၏မိန်းမကို သွေးဆောင် ဖြားယောင်းရန်ကြိုးပမ်းသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်းကို ခံခဲ့ရ သည်။ ယောသပ်သည် သူ မကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်အတွက် ထောင်ထဲတွင် နှစ်အနည်းငယ် နေခဲ့ရသည်။ ဤသို့ဖြစ်ပျက်တာတောင်မှ၊ ယောသပ်သည် မနာကြည်း၊ မခါးသီးခဲ့ပါ။
အချိန်တန်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် ယောသပ်ကို ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ဖာရောဘုရင်အောက်တွင် ယောသပ်သည် အီဂျစ်ပြည်တပြည်လုံးအား အုပ်စိုးရသောမင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောသပ်သည် ဘုရားသခင်ပေး သော ဥာဏ်ပညာအားဖြင့် သီးနှံကြွယ်ဝစွာထွက်သော ၇-နှစ်အတွင်း သီးနှံတို့ကို သိုလှောင်ခဲ့သည်။ ထို့ နောက် ကြီးစွာသောငတ်မွတ်ခြင်းဘေးသည် တကမ္ဘာလုံးတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင် ယောသပ် ၏ အစ်ကိုများသည် သူတို့အတွက်နှင့် မိသားစုအတွက် အစားအစာရှာရန် အီဂျစ်ပြည်သို့ ရောက်လာခဲ့ သည်။ သူတို့သည် ယောသပ်ရှေ့တွင် ရပ်နေကြသော်လည်း ယောသပ်အား မမှတ်မိခဲ့ပါ။ အီဂျစ်ပြည်၏ ၀န်ကြီးချုပ်အနေဖြင့်၊ ယောသပ်သည် သူ၏အစ်ကိုများအား ကလဲ့စားချေရန်အတွက် သူ၏တန်ခိုးအာဏာ ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သူက ““အခု၊ ငါ့အစ်ကိုတွေဟာ ငါရှိစေလိုတဲ့နေရာမှာ ရှိနေကြပြီ။ သူတို့ရဲ့အပြစ် တွေအတွက် အဖိုးအခပြန်ပေးစေမည်။ သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာ ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့ ငါ့အိပ်မက်ဟာ မှန်ကန်ကြောင်းကို သူတို့အား သိစေမည်။ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာမျိုးကို ငါ့အား မလုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့် အပြစ် မှလွတ်အောင် မရှောင်ကွင်းနိုင်ကြောင်း သူတို့အား ငါပြသမည်။””ဟု တွေးချင်တွေးနိုင်သည်။ သို့သော် ဤ သို့သော ကလဲစားချေရန်အတွေးမျိုးသည် ယောသပ်စိတ်ထဲသို့ မ၀င်လာခဲ့ပါ။ သူက အစ်ကိုများအား ဤသို့ ပြောခဲ့သည်။ ““သင်တို့ကိုယ်သင်တို့ ၀မ်းမနည်း၊ အမျက်မထွက်ပါနှင့်၊ သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်အား ဤနေရာသို့ရောင်းစားခဲ့သည်။ သို့သော်အသက်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့အားဤနေရာသို့ ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်အား ဤနေရာသို့ စေလွှတ်သူမှာ ဘုရား သခင်သာဖြစ်သည်။ သင်တို့ မဟုတ်ပါ။””
ယောသပ်သည် ဘုရားသခင်ကို သူ၏တုံပြန်မှုများအား ချုပ်ထိန်းစေခဲ့သည်။ သူသည် အစ်ကိုများ အပေါ်တွင် ကြင်နာစွာ ကျေးဇူးပြုခဲ့သည်။ သူသည် အစ်ကိုများနှင့် သူတို့၏မိသားစုများအား စောင့်ရှောက် ပေးခဲ့သည်။ ယောသပ်၏ တုံ့ပြန်မှုတို့သည် မှန်ကန်ပြီး ထာဝရကာလကောင်းသော အကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ယောသပ်ကဲ့သို့ အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ချင်မှရင်ဆိုင်ရမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုးဝါးစွာ ဆက်ဆံခြင်း အချို့ကို ခံရနိုင်သည်။ အပြစ်လုပ်၍ ပုန်ကန်တတ်သော လူသားများအားဖြင့် ပြည့်လျက်ရှိသော ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် အသက်ရှင်စဉ်အခါတွင်၊ မမျှမတ ရိုင်းပျစွာ ဆက်ဆံခြင်းကို သင်ခံရသောအခါ မအံ့သြသင့်ပေ။ ဤကဲ့သို့ ဆက်ဆံခံရမှုသည် ဤအချိန်တွင်သာ ကျွန်ုပ်တို့အား ဒုက္ခရောက်စေနိုင်ပြီး၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀အပေါ်သို့ ကြာရှည်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ မရှိနိုင်ပါ။ အရေးကြီးသောအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုသာဖြစ်သည်။ ဤအရာတို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘ၀နှင့် အခြားသူတို့၏ဘ၀ အပေါ်သို့ ကြာရှည်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိသည်။
အောက်ပါအခြေအနေအချို့အား တွေ့ကြုံရသောအချိန်မျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းစွာ တုံ့ပြန် လေ့ရှိသည်။ မည်သို့မှန်ကန်စွာ တုံ့ပြန်ရမည်ကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။ အခြေအနေတစ်ခုစီတိုင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသောလူသည် သူ၏တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ် နိုင် ကြောင်း ကို သတိပြုမှတ် သားပါ။
(၁) ရိုင်းပြခြင်း (သို့) မယဉ်ကျေးမပျူငှာခြင်း
မည်သူကမှ ရိုင်းပြစွာနှင့် မပျူငှာစွာ ဆက်ဆံခြင်း မခံလိုကြပါ။ ဤသို့ဆက်ဆံခံရသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယေဘုယျတုံ့ပြန်မှုမှာ သူတို့ပြုမူသကဲ့သို့ ပြန်လည် ပြုမူဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့သော တုံ့ပြန်မှုမျိုးသည် ဘုရားသခင်အား မနှစ်မြို့စေပါ။ ကျမ်းစာက ခရစ်ယာန်များသည် ပျူငှာရမည်ဟု ပြော ထားသည်။
နေစဉ်သတင်းစာကြီးတစ်စောင်၏ အယ်ဒီတာက ဤအကြောင်းအရာကို ပြောပြခဲ့သည်။
တည၌ ကျွန်တော်သည် မိတ်ဆွေတဦးနှင့်အတူ သတင်းစာရောင်းရာဆိုင်သို့ လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ သည်။ သူသည် သတင်းစာတစောင်ကို ၀ယ်ပြီးနောက် သတင်းစာရောင်းသည့် ကောင်လေးအား ယဉ်ကျေးစွာ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့သည်။ ကောင်လေးသည် သူ့ကိုအသိအမှတ်မပြုရုံမက မော့၍ပင် မကြည်ပါ။ ““သုန်မှုန်နေတဲ့ ကောင်းလေး””ပဲဟု ကျွန်တော်က မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ““သူကညတိုင်းဒီလိုပုံစံ ပါပဲ””ဟု ကျွန်တော်မိတ်ဆွေက ပြန်ပြောသည်။ ““ဒါဆို မင်းကသူ့ကိုဆက်ပြီး ဘာကြောင့် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆက်ဆံနေတာလဲ””ဟု ကျွန်တော်က မေးလိုက်သည်။ ““ဘာကြောင့် မဆက်ဆံ ရမှာလဲ။ ငါ့ရဲ့ပြုမူလုပ် ဆောင်မှုပုံစံကို သူ့ကဘာကြောင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးရမှာလဲ””ဟု မိတ်ဆွေဖြစ်သူက ပြန်ပြောခဲ့သည်။
လူတိုင်းနီးပါးသည် မမျှတစွာဆက်ဆံခြင်းကို တချိန်မဟုတ်တချိန်ခံရသည်။ ဤသို့ဆက်ဆံခံရ ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား နာကျင် စိတ်ပျက် စေသည်။ ခရစ်ယာန်တဦးဖြစ်ခြင်းသည် အခြားသူတို့ ကဲ့သို့ပင် မမျှတစွာ ဆက်ဆံခံရခြင်းအား စိတ်ထိခိုက်ခံစားရခြင်းမရှိ ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့သော် ခရစ်ယာန်များ အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန် မှုပုံစံက မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမူ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး၏ သမီးဖြစ်သူသည် မမျှတစွာ ယာယီ ထိန်းသိမ်းထားခြင်း (အပြစ်ဒဏ်)ကိုခံရသည်။ သူမသည် ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အကြီးအကျယ် ဂယယ်ထအောင် လုပ်နိုင်ပါ သည်။ (သို့) နာကြည်းခြင်းအား သူမ၏နှလုံးသား၌ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤအရာ ၂ခု လုံးအား သူမ မလုပ်ခဲ့ပါ။ သူမသည် ဤကိစ္စကို ရိုးရှင်းစွာ လျစ်လျူရှုပြီး ““အိုး၊ ယာယီထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံသင့်တဲ့ ကိစ္စအတော် များများ အရင်က ကျွန်မလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အထိန်းအသိမ်းမခံခဲ့ရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စက ဒီလောက်ကြီးမဆိုးပါဘူး””ဟု ပြောခဲ့သည်။
ဤကောင်မလေးကဲ့သို့ မမျှတစွာ ဆက်ဆံခံရခြင်းအား ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သော ခရစ်ယာန်သည် ပျော်ရွှင်သော ခရစ်ယာန်တဦး ဖြစ်သည်။
(၃) မာနကို ထိခိုက်ခြင်း
သင်၏မာနကို ထိခိုက်စေသောအရာတခုခုကို အခြားသူတဦးက ပြောသောအခါ ၊ သင်သည် ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ သင်သည် ထိုနာကျင်မှုနှင့် နာကြည်းခြင်းအား သင့်ဘ၀တလျှောက်လုံး သင့်ရင်ထဲတွင် မျိုသိပ်ထားနိုင်သည်။ ကြီးမားသော နှလုံးသားဖြင့် သင်သည် ဤသို့ပြောနိုင်လျှင် မည်မျှ ပိုကောင်းလိမ့်မည်နည်း? ““သူမပြောသည့်အရာက ကျွန်ုပ်၏မာနကို ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမဟာ ဒီထက်ပိုပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ဟာ မိမိကိုယ်ကို သိသလိုမျိုး သူမဟာ ကျွန်ုပ်အား သိခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ဒီထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြောတာတောင် အမှန်ကို ပြောနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။””
အခြားသူတဦးက ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် တိုက်ခိုက်ထိပါးခြင်း အပြစ်ကျူးလွန်သောအခါ၊ ဒေါသထွက်ရန်နှင့် မှားယွင်းစွာ တုံ့ပြန်မိရန်မှာ အလွန်ပင် လွယ်ကူသည်။ သို့သော် စိုက်သည့်အတိုင်း ရိတ်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ကို သတိ ရသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က အခြားသူတို့အား ဆက်ဆံသည့် ပုံစံအတိုင်း၊ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြုမူ ဆက်ဆံလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများအပေါ်တွင် ကြင်နာ၍ ခွင့်လွှတ်ပေးပါက၊ ဘုရားသခင်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝစွာဖြင့် ခွင့်လွှတ်ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြာသူတို့အပေါ်တွင် မာကျောခက်ထန်၍ ခွင့်မလွှတ်ပေးလိုပါက၊ ဘုရားသခင်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်လာလျှင် တင်းကြပ်စွာ ပြုမူလိမ့်မည်။ ယေရှုက သင်တို့သည် သူတပါးတို့၏ အပြစ်ကိုလွှတ်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည် သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော် မူမည်။ သင်တို့သည် သူတပါးတို့၏အပြစ်ကို မလွှတ်လျှင်၊ သင်တို့အဘသည် သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မမူ”” ဟု ဆိုသည်။ မသဲ ၆း၁၄-၁၅
တစ်ခါ၌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Oglethorpe က John Wesley အား ဤသို့ မာန်ပါပါပြောခဲ့သည်။ ““ငါ ကတော့ ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ပေး တတ်ဘူး”” ထိုအခါ John Wesley က ““ဒါဆို ခင်ဗျား ဘယ်တော့မှ အပြစ် မလုပ်မိဖို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်””ဟု ပြန်ပြောခဲ့သည်။
(၅) အခြားသူတဦး၏ ““ရက်ရက်စက်စက် ကြိမ်းခြင်း”” ကိုခံရခြင်း
အခြားသူတဦးက ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါသထွက်ဖွယ် ရိုင်းစိုင်းသော မှတ်ချက်တို့ကို ချပါ က၊ ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း ထိုသူကဲ့သို့ပင် ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုကြသည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် အခြေအနေ ဆိုးတစ်ခုအား ပို၍ဆိုးစေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး နူးညံ့သောအဖြေ မျိုးအားဖြင့် ဤအခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ပါက များစွာပိုကောင်းမည်ဖြစ်သည်။
စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် အခြေအနေတို့သည် အလွန်ပင် တင်းမာလာသဖြင့်၊ မိန်းမတဦး သည် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးဆောင်သူအား ””ကျွန်မရှင်နဲ့ သဘောလုံးဝမတူဘူးဆိုတာကို ရှင့်ကိုသိစေချင် တယ်””ဟု ဒေါသတကြီး ပြောခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဦးဆောင်သူသည် မိန်းမဘက်သို့လှည့်ပြီး ခေတ္တမျှ သူကို ကြည့်ကာ ““ကျွန်တော်လည်း သင့်ကို နှစ်သက်ပါတယ်””ဟု အပြုံးလေးဖြင့် ပြန်ပြောခဲ့သည်။ သူသည် မိမိ ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တင်းမာမှုသည် ပြေလည်သွားခဲ့ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော အခြေ အနေသို့ ပြန်ရောက်သွားခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲပြီးနောက် သူတို့နှစ်ဦးသည် အတူတူထွက်ချိန်တွင် သူမက သူ့ဘက်သို့လှည့်ကာ ““ကျွန်မလည်း ရှင့်ကို နှစ်သက်ပါတယ်””ဟု အပြုံးလေးဖြင့် ပြောခဲ့သည်။ ဤလူ သည် မည်မျှ ဥာဏ်ပညာရှိလိုက်သနည်း။ ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ““ရက်ရက်စက်စက် ကြိမ်းခြင်း””ကို ခံရသောအခါ ဤကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို ချုပ်ထိန်းနိုင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း မည်မျှဥာဏ်ပညာရှိလိုက်မည်နည်း။ ကျမ်းစာက ““ဖြည်းညှင်းသောစကားသည် စိတ်ကိုဖြေတတ်၏။ ကြမ်းတမ်းသောစကားမူကား၊ အမျက်ကို နှိုးဆော်တတ်၏””ဟုဆိုသည်။ သု ၁၅း၁
ဝေဖန်ခြင်းများသည် တခါတရံမှန်သော်လည်း တခါတရံ မမှန်ပါ။ အကယ်၍ ဝေဖန်ခြင်းသည် မှန်ကန်ပါက၊ ဤဝေဖန်ခံရခြင်းမှ သင်ခန်းစာတခုခုကို သင်ယူသင့်သည်။ အကယ်၍ မမှန်ကန်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဤအရာက အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ခွင့်မပြုသင့်ပေ။ ဘုရားသခင်က ဤကိစ္စအား ကိုင်တွယ်မှာကို သိရှိလျက်၊ ဘုရားသခင်ထံသို့ ပေးအပ်လိုက်ပါ။
ပညာရှိတဦးက ““သင်ဘက်ကသာမှန်ပါက သင်သည် သင်၏အမျက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာသေချာသည်။ သို့သော် သင်ဘက်က မှားပါက၊ သင်၏အမျက်မထွက်စေရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသင့်သည်””ဟု ဆိုခဲ့သည်။
လူတိုင်းသည် အမှားတခုခုကို တချိန်မဟုတ်တချိန်ချိန်တွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ မကြာခဏပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှ ဆင်ခြေပေး၍ ရှောင်ထွက်လေ့ရှိကြပြီး အခြားသူတဦးအပေါ်သို့လည်း အပြစ်ပုံချ လေ့ရှိကြသည်။ အမှားတခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှားယွင်းစွာ တုံ့ပြန်လိုက်မှုသည် ဆိုးသော အခြေအနေတခုအား များစွာသာ၍ ဆိုးစေသည်။ အခြားတဖက်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့၏ အမှားများကို ၀န်ခံပြီး မှန်ကန်စွာ တောင်းပန်ပါက ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှားများကိုပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
University of Edinburgh တက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခ ဖြစ်သူ Stuart Blackie သည် အတန်းတတန်းအား ကြားနာနေစဉ် အတန်းသားတဦး သည် မှားသောလက်ဖြင့် သူ စာအုပ်ကို ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းသားက ရှင်းပြရန် လုပ်စဉ်တွင် ဘလက်ကီက ““မင်းစာအုပ်ကို ညာလက်နဲ့ကိုင်ပြီး ထိုင်တော့””ဟု အော်ငေါက် လိုက်သည်။
ထိုအခါ ကျောင်းသားက သူ၏ညာလက်ကို ထောင်ပြလိုက်သည်။ သူညာလက်သည် လက်ကောက်ဝတ်မှစ၍ ပြတ်နေသည်။ ဤ ပါမောက္ခကြီးသည် ခေတ္တငြိမ်သက်တွေဝေသွားပြီးနောက် သူ့မျက်လုံးမှ မျက်ရည်များစီးကျလျက် ကျောင်းသားထံသို့သွားပြီး ““မင်းလက် ဒီလိုဖြစ်နေတာ ငါ လုံးဝ မသိခဲ့ဘူး။ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါလား?ဟု မေးခဲ့သည်။ ကျောင်းသားလေး၏ ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ဤကိစ္စသည် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဤဖြစ်အပျက်ကို ကျမ်းစာညီလာခံတစ်ခုတွင် ပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲပြီးနောက် လူတဦးသည် ရှေ့ထွက်လာပြီး သူ့ညာလက်ကို မြှောက်ပြခဲ့သည်။ လက်ကောက်ဝတ်မှာ ပြတ်နေသည်။ သူက ““ကျွန်တော်ကို ပါမောက္ခ ဘလက်ကီက ခရစ်တော်ထံသို့ ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ သူသာ ကျွန်တော့်ကိုဖတ်ပြီး သူ့အမှားကို အမှန်ပြင်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော့ကို ခရစ်တော်ဆီ ပို့ပေးနိုင် မှာ မဟုတ်ပါဘူး””ဟု ပြောခဲ့သည်။
ဤလက်တွေ့ဘ၀အဖြစ်အပျက်များမှ သင်ယူရမည့် သင်ခန်းစာမှာ ““အမျက်ဒေါသက ကျွန်ုပ်၏ တခုတည်းသော တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ရမည့် အခြေအနေမျိုးအတွင်းသို့ မကျရောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် အမျက်ထွက် ရန် မလိုအပ်ပါ။ အခြားသူတို့က ကျွန်ုပ်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေမည့်အရာတို့ကို ပြောလုပ်ကြသော်လည်း မည်သူ ကမှ ကျွန်ုပ်၏အမျက်ကိုထွက်အောင် မလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပါက၊ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်၏ ရွေးချယ်မှုကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သည်းခံခြင်း၊ ဟာသဥာဏ်၊ ကြင်နာ ခြင်း (သို့) အခြားပုံစံတမျိုးမျိုးအားဖြင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။
မှားယွင်းသောတုံ့ပြန်မှုများအား ဆက်လက်ဖက်တွယ်နေခြင်းအား သတိပြုပါ။
မှားယွင်းသောတုံ့ပြန်မှုများအား ဆက်လက်ဖက်တွယ်နေခြင်းသည် ပို၍နက်ရှိုင်းသော ပြသနာများ အား ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသော တုံ့ပြန်မှုတခုအား ဖက်တွယ်ထားပါက ထိုအရာသည် နာကြည်းမှုတခုဖြစ်လာသည်။ နာကြည်းခြင်းအား ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်း ထားသောအခါ ဤအရာ သည် ခါးသီးခြင်းဖြစ်လာသည်။ နာကြည်းခြင်းနှင့် ခါးသီးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့၏ဘ၀တွင် နာကြည်းခြင်းနှင့် ခါးသီးခြင်းက ခြေကုပ်မရအောင် တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာအချို့ကို လေ့လာကြပါစို့။
· တိုက်ခိုက်မှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်း
ယုံကြည်သူများသည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် မိတ်သဟာယဖွဲ့သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌ တည်မြဲနေသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်စေမည့်အရာတို့ကို ကျော်ကြည့် (လျစ်လျူရှု) နိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ ကျမ်းစာက ““တရားတော်ကို နှစ်သက်သောသူတို့၌ ကြီးစွာသော ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါ၏။ သူတို့ စိတ်ပျက်စရာ အကြောင်း မရှိပါ””ဟု ဆိုသည်။ ဆာ ၁၁၉း၁၆၅
မိမိတို့၏ အမျက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ပြစ်မှားမှုများအား လျစ်လျူရှုနိုင်ခြင်းသည် ချီးမွမ်းထိုက်သော အရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““သမ္မာသတိရှိသောသူသည် မိမိအမျက်ဒေါသကို ချုပ်တည်း တတ်၏။ သူတပါးပြစ်မှားခြင်းကို သည်းခံသောသူသည်လည်း ဘုန်းအသရေရှိ၏””ဟု ဆိုသည်။ သု ၁၉း၁၁
· နားလည်မှုမှားခြင်းများအား အလျင်အမြန်မှန်စေပါ။
စာတန်၏လက်နက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ တယောက်ကိုတယောက် နားလည်မှုမှားစေရန်အတွက် ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်သည်။ သူသည် လိမ်ညာခြင်းနှင့် မှားယွင်းခြင်းတို့အား အခြေ အနေတခုအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းလေ့ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် လူများစွာသည် အခြားသူများက အပြစ် မကျူးလွန်ခဲ့သော်လည်း သူတို့တွင် အပြစ်ရှိသည်ဟုထ င်ကာ ရန်လုပ်လေ့ရှိကြသည်။
ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားယုံကြည်သူတဦးဦးနှင့် နားလည်မှုလွဲပါက၊ ထိုသူထံသို့သွား၍ လွဲနေသောအရာကို ပြန်တည့်မတ်အောင် လုပ်ဖို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောထားသည်။ အကယ်၍သာ ဘုရား သခင်၏သားသမီးများသည် ဤအချက်ကို နာခံပါက၊ သူတို့ကြားထဲရှိ ပြသနာ များစွာ တို့သည် ပြေလည် သွားနိုင်ပါသည်။
သာသနာပြုခေါင်းဆောင်တဦးသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတနိုင်ငံ၌ သာသနာပြုများ ညီလာခံတခုကို ဦးစီး ကျင်းပခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင် သာသနာပြုတဦးသည် သူ့ထံသို့လာပြီး ““ဒီညီလာခံမှာရှိတဲ့ သာသနာပြုတဦး က ကျွန်တော့်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေပေမယ့် သူဘာကြောင့် မကျေမနပ် ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး”” ဟုပြောခဲ့သည်။ မကြာမီအချိန်တွင် အခြားသာသနာပြုကလည်း ခေါင်းဆောင်ထံသို့လာ၍ ပထမသာသနာပြုပြောခဲ့သောစကားအတိုင်းပင် ပြောခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ထိုသူနှစ်ဦးလုံးက တယောက် ကိုတယောက် မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြသည်ဟု ထင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးလုံး မှားယွင်းခဲ့သည်။ အမှန်မှာ သူတို့နှစ်ဦးကြားထဲတွင် တယောက်ကိုတယောက် မကျေနပ်စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပေ။ စာတန်က ဤအတွေးမျိုးကို သူတို့စိတ်ထဲသို့ ထည့်ခဲ့ပြီး သူတို့ကလည်း ထိုအတွေးကို လက်ခံခဲ့သောကြောင့် အလိမ် ညာမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
· မှားယွင်းသောသဘောထားများအား လျင်မြန်စွာ ငြင်းပယ်ပါ။
တခါတရံ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အခြေအနေတခု၌ မိမိတို့၏ ချက်ခြင်းလက်ငင်း တုံ့ပြန်မှုအား ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသော တုံ့ပြန်မှုတခုအား နာကြည်ခြင်းတခု မဖြစ်လာအောင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသော တုံ့ပြန်မှု တခုအား ငြင်းပယ်ရန်အတွက် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ခရစ်ယာန်ဆရာမတစ်ဦးသည် လမ်းလျှောက်နေစဉ်တွင် သူမအား ခါးသီးစေနိုင်သည့်အရာတစ်ခု ကို လုပ်ခဲ့သောသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆရာမအကြောင်းကို တွေးမိခဲ့သည်။ ရုတ်တရက် သူမသည် လမ်းလျှောက်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး ““ကျွန်မရဲ့နာကြည်းခြင်းကို ငြင်းပယ်မယ်။ နာကြည်းခြင်းကို ဘယ်တော့မှ ရင်ဝယ်မပိုက်ထားဘူး””ဟုဆိုခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် သူမက ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ““အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်မဟာ ဘာကြောင့် နာကြည်းခဲ့လဲဆိုတာ လုံးဝမမှတ်မိဘူး””ဟု ပြောလေ့ ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က ““အမျက်ထွက်ရာတွင် အပြစ်မရှိစေနှင့်။ အမျက်မပြေဘဲ နေမ၀င်စေနှင့်””ဟု ဆိုသည်။ ဧ ၄း၂၆-၂၇
ဤနေရာ၌ ဘုရားသခင် ပြောလိုသည်မှာ မှားယွင်းသော သဘောထားများအား မဖက်တွယ်ထား နှင့်ဟု ပြောလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူတဦးဦးအပေါ်တွင် မှားယွင်းသောသဘောထားများ ရှိနေသည်ဟု မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ခံစားမိပါက၊ ထိုသူ အတွက် စတင်၍ဆုတောင်းပေးသင့်သည်။ ထိုလူက သင့်ကို ဆိုးဝါးစွာဆက်ဆံလျှင်တောင်မှ ထိုလူအတွက် နေ့စဉ်ဆုတောင်းပေးပါ။ နာကြည်းခြင်း သည် သင့်စိတ် နှလုံးထဲသို့ မ၀င်လာရန်အတွက် သင့်အတွက်လည်းဆုတောင်းပါ။ ယေရှုက ““သင်တို့ကို နှောင့်ယှက် ညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့၊ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းကြလော့။””ဟု ဆိုသည်။ မဿဲ ၅း၄၄
အပြင်ဘက်ပိုင်းမှ လှုံ့ဆော်မှု့တစ်ခုခုက ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တုံ့ပြန်ကြမည်ကို အဆုံးအဖြတ်မပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ထိန်းချုပ်နေသောအရာ က အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား ဇာတိစိတ်က အုပ်စိုးနေပါက၊ ဇာတိစိတ်က စေခိုင်းသည့်အတိုင်း တုံ့ပြန်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်က အုပ်စိုးနေလျှင်မူ၊ သူ့အသက်တာကဲ့သို့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအနေဖြင့်၊ မိမိနှစ်သက်သလို တုံ့ပြန်နိုင်သော လွတ်လပ်မှု့ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများသည် ဘုရားသခင်၏ထိန်းချုပ်မှု့အောက်တွင် ရှိရမည်။ ဘုရားသခင်က ခရစ်ယာန်များအား မည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကို တိကျစွာ အမိန့်ပေးထား သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က ““သူတပါး၌ အဘယ်သူမျှရန်တုံ့မမူခြင်းငှာ၊ သတိပြု၍၊ အချင်းချင်း တို့၌၄င်း၊ ခပ်သိမ်းသောသူတို့၌၄င်း၊ ကာလ အစဉ်ကြိုးစား၍ ကျေးဇူးကိုပြုကြလော့။””ဟုဆိုသည်။ ၁သက် ၅း၁၅
ဤကျမ်းပုဒ်က ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများအား လက်စားချေရန် ကြိုးပမ်းမည့် အစား ဆိုးဝါးစွာ ဆက်ဆံခံရခြင်းကို သည်းခံခြင်းရှိစွာ ခံယူကြရန်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပုံသက်သေဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““...ခရစ်တော်သည် ငါတို့ အတွက်ခံတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ခြေတော်ရာကို လျှောက်လိုက်စေခြင်းငှာ ပုံသက်သေကို ထားတော်မူပြီ။ ထိုသခင်သည် ဒုစရိုက်ကို မပြု၊ နှုတ်တော်၌လည်း မုသာကိုမတွေ့။ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံရသောအခါ၊ ပြန်၍မကဲ့ရဲ့။ အသေခံရသောအခါ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကိုမပြု။ တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူသောသူ၌ ကိုယ်ကိုကိုယ်အပ်တော်မူ၏။”” ဟုဆိုသည်။ ၁ပေ ၂း၂၁-၂၃
ကျွန်ုပ်တို့ တုံ့ပြန်မှုများ၏ အရေးကြီးမှု့ကို ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားသိစေလိုသည်။ အိန်္ဒိယကို သာသနာပြုခဲ့သူ Miss Amy Carmichael က တစ်ခါတွင် ဤသို့ပြောခဲ့သည်။ ““အခြေအနေတခု၏ အရေးကြီးမှု့သည် ထိုအခြေအနေပေါ်တွင် မမူတည်ပါ။ ထိုအခြေအနေအပေါ်တွင် တုံ့ပြန်လိုက်သော ကျွန်ုပ် တို့၏ တုံ့ပြန်မှု့အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သာ ခက်ခဲသည့်အချိန်များတွင် နာကြည်းခြင်းမှ ကင်းဝေးစွာ၊ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ အတွင်းပိုင်း၌ ချိုသာမှုတို့ဖြင့် ပြည့်နှက်စွာဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ခြင်း သည်သာ အရေးအကြီးဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တုိ့အား စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်း စေသော အရာများသည် ရွေ့ လျားကျော်လွန်သွားသော လေကဲ့သို့ မကြာမီ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ သို့သော် လေတိုက်နေစဉ် အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြုမူ လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ထာဝရကာလအကျိုးဆက်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာတို့သည် သိပ်အရေးမကြီးပါ။ အမှန်တကယ် အရေးကြီးသော အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖြစ်ပျက်သော အရာ တို့အပေါ်တွင် တုံ့ပြန်လိုက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများတွင် ထာဝရကာလ အကျိုးဆက်များ ရှိသည်ကို ဘုရားသခင် က ကျွန်ုပ် တို့အား မြင်စေနိုင်ကြပါစေ။
ကျွန်ုပ်တို့အား ဒုက္ခဖြစ်စေသောအရာများသည် မကြာခင် ရွေ့လျားပျောက်ကွယ်သွားမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုများတွင် ထာဝရကာလ အကျိုးဆက်များရှိသည်။
(၁) ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာတို့အပေါ်တွင် တုံ့ပြန်လိုက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုသည် အရေးမကြီးပါ။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့က အခြားသူတို့အား ပြုမူဆက်ဆံသည့် ပုံစံအတိုင်း ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြုမူ ဆက်ဆံလိမ့်မည်။
(၃) မှားယွင်းစွာ တုံ့ပြန်မှုများ၏ ကြီးမားသောအန္တရာယ်မှာ ဤတုံ့ပြန်မှုများသည် နက်ရှိုင်းသော ပြသနာများဖြစ်လာသည့်အထိ ဖက်တွယ် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
(၄) နာကြည်းခြင်းနှင့် ခါးသီးခြင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀တွင် ခြေကုပ်မရစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ သည် မှားယွင်းသောသဘောထားများအား အလျင်အမြန် ငြင်းပယ်စွန့်ပစ်ရမည်။
(၅) အပြင်ဘက်ပိုင်း လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုခုက ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တုံ့ပြန်ကြမည်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
(၆) အကယ်၍ ဇာတိစိတ်က ကျွန်ုပ်တို့အား အုပ်စိုးနေပါက၊ ဇာတိစိတ်က စေခိုင်းသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
(၇) ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုများတွင် ရေရှည်နှင့် တခါတရံထာဝရကာလအကျိုးဆက်များရှိသည်။
(၈) တစုံတဦးက ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါသထွက်ဖွယ် ရိုင်းပြသောမှတ်ချက်တို့ကို ချပါက၊ နူးညံ့သောအဖြေအားဖြင့် ပြန်လည် တုံ့ပြန်ခြင်း သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
(၉) အမျက်ဒေါသကသာ ကျွန်ုပ်၏တခုတည်းသော တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သော အခြေအနေအချို့ရှိသည်။
(၁၀)ကျွန်ုပ်တို့၏အမျက်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ပြစ်မှားမှုများအား လျစ်လျူရှုနိုင်ခြင်းသည် ချီးမွမ်းထိုက် သောအရည်အသွေးများဖြစ်သည်။